Atụmanya na azụmaahịa gị | Martech Zone
Anyị nwere nzukọ abụọ dị egwu ụnyaahụ, otu na onye ahịa ya na otu nwere atụmanya. Mkparịta ụka abụọ ahụ gbara gburugburu na-atụ anya na nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa. Companylọ ọrụ mbụ ahụ bụ nnukwu ụlọ ahịa na-apụ apụ na nke abụọ bụ nnukwu nzukọ na-adaberekarị na nchekwa data nchekwa na nzaghachi ozi ziri ezi.
Ulo oru abuo ahu ghotara, rue dollar, ka ahia ahia ha na ahia ha si enyere ha aka. Saleslọ ahịa ahụ ghọtara na, na ndị ahịa ọ bụla akwụ ụgwọ, ha nwere ike ịtụ anya mmụba dị ukwuu na ndu emechiri emechi. Organizationlọ ọrụ nke abụọ na-amalite ịhụ nlọghachi azụ na azụmaahịa ka ha na-aga n'ihu na-edozi ọrụ ha. Ha ghọtara na ohere ahụ bụ ịkwaga n'ịntanetị.
Igodo nke ulo oru abuo n’itinye olile anya n’uzo ahia ha gha eme na nloghachi nke anyi inbound ahịa gị n'ụlọnga. N'inye ohere a, echere m na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na-abata abaghị uru nye ọtụtụ ụlọ ọrụ site na ịtọ atụmanya ndị jọgburu onwe ha. Ọtụtụ mgbe, ha kwenyere na ọ bụrụ na onye ahịa nwere mmefu ego - ha chọrọ ya.
Nke a bụ atụmatụ dị egwu. Anyị ekwuola ya inbound ahịa nwere dependencies, ma e nwere ndị ọzọ azum na-arụ ọrụ incredibly ọma na nwere a ziri ezi nloghachi na ego.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa gwara anyị na ha nwere obere mmefu ego ma chọọ iwu ngwa ngwa ka ha wee nwee ike ịmalite ụlọ ọrụ ha, anyị ga-eme ka ha banyekwuo ụgwọ kwa Pịa. Ndị ahịa anyị na-eji Ezigbo Ochie maka nke a. Ramp elu na njikarịcha bụ ngwa ngwa na ndị folks na Evereffect na-arụ ọrụ ngwa ngwa iji mee ka onye ahịa nweta nsonaazụ amụma. Ọnụ ego ọ bụla nwere ike ịdị elu, mana nzaghachi na nsonaazụ dị mma nke mere na ha dị egwu. Ka oge na-aga, ọ bụrụ na onye ahịa anyị na anyị na-arụ ọrụ na usoro inbound marketing, ha nwere ike iji nyocha akwụ ụgwọ maka oge achọrọ ma ọ bụ iji zụọ ahịa ahịa mgbe ha kwesịrị ịbawanye uto n'èzí njedebe nke usoro ndị ọzọ.
Salesre ahịa ọpụpụ na-arụ ọrụ dị egwu, mana ọ na-ewe oge iji kpoo onye ọrụ. Anyị na-ahụ ọpụpụ na-arụ ọrụ nke ọma - karịa oge - mgbe nnukwu nkwekọrịta chọrọ nurturing na expertise of a great business development consultant. O di nwute, ezie, a owo esịmde a oke fọrọ… na mgbe ha na-eme, ị ga-iku na ịzụ ọzọ ahịa ndị mmadụ. Ọzọkwa, anyị anaghị ewedata mmetụta nke ọkachamara n’ahịa na-apụ apụ. Naanị anyị na-anwa ịtọ ihe ndị anyị ga-atụ anya ha.
Mgbasa ozi na-enwekarị ọnụ ala yana nkwụghachi dị ala na ntinye ego ahụ. Agbanyeghị, mgbasa ozi nwere ike itinye aka na njirimara aha ma nwee ike inye aka belata ahịa. Anyị anaghị emegide mgbasa ozi, mana ọ bụrụ na mkpa na ịdị mma nke ndu ga-adị elu, anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ndụmọdụ ka itinye ego na mpaghara ndị ọzọ.
Inbound Marketing tinye n'ọrụ usoro dị irè ọdịnaya dịtụ iche ma nwee njiri mara n'ihi oke mmetụta na ọnụ ala dị ala ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụghị ngwa ngwa na-eweta ngwa ngwa. Usoro atumatu nke jiri ma nyocha na usoro ndi mmadu na-ewe oge iji wuo ike. Ebe ọ bụ na ọ bụ mgbalị na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ na-arụpụta oge na-aga n'ihu. Nke ahụ bụ, ka ị na-eweta ọdịnaya taa, ọdịnaya ị dere otu ọnwa gara aga ka na-arụ ọrụ iji na-eduga gị.
Ọzọkwa, inbound ahịa azum nwere ike inye isi ohere ka mma ịghọta ukwuu ruru eru na-eduga si obere mara mma. Inbound Marketing nwekwara ike ịnye nghọta maka ndị otu na-apụ apụ nwere ọgụgụ isi banyere ebumnuche ebumnuche. Ghọta ihe ha na-agụ, ihe ha na-enyocha na weghaara ụdị data nwere ike ịkwadebe ma mechie ụzọ na ngwa ngwa.
Mkpebi itinye ego na azụmaahịa inbound bụ nke dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ ziri ezi yana akụrụngwa iji mezuo ya. Nke a apụtaghị na ọ bụ mkpebi ziri ezi maka ụlọ ọrụ ọ bụla na ọkwa ọ bụla, agbanyeghị. Nyere ikike dị nta na mkpa dị iche iche, ị nwere ike chọọ kesaa mmefu ego gị na akụrụngwa ndị ọzọ. Dịkarịa ala maka ugbu a!
Tags: laghachi na ntinye ego ahiaROI
Jun 20, 2013 na 9:15 AM
Daalụ maka nke a. Perkwụ ụgwọ kwa Pịa bụ n'ezie ụzọ ị ga-aga ma ọ bụrụ na enwere ngwa ngwa mana enwere ụzọ ndị ọzọ, mba?